စာရေးသူရဲ့အခုလက်ရှိဘလော့ဂ်သည် (၆.၇.၂၀၁၂) ကခဏပျောက်ဆုံးခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူနောက်ထပ်ဘလော့ထပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအသစ်လုပ်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ်မှာပဲ ပို့စ်အသစ်တွေတင်ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းပေးချင်ပါသည်။ စာရေးသူရဲ့နောက်ထပ်ဘလော့ဂ်လေးက ဒီမှာပါ။
Posted by Unknown at 2:55 AM2comments: Links to this post
ညက အိပ်မက်ထဲမှာ စာရေးသူ အကြော်တွေ အားရပါးရ စားနေခဲ့သည်။ ခရမ်းသီးကြော်၊ဗူးသီးကြော်၊ဗယာကြော်။ အကြော်တွေကို စုံလို့။ အချဉ်ကလည်း ကောင်းမှကောင်း။ ဒါပေမယ့် စားရတာက အိပ်မက်ထဲမှာ ဖြစ်သည်။ စာရေးသူ အကြော်မစားရတာ ငါးရက်လောက်ရှိပြီ။ စားချင်ရင် ၀ယ်စားပေ့ါလို့ မပြောကြနဲ့နော်။ ဘာ့ကြောင့်ဝယ်မစားတာလဲဆိုတော့
ဂျာနယ်ထဲမှာ ဖတ်ရသော သတင်းတွေက မကောင်း။ (၂၃.၆.၂၀၁၂) ထုတ် Voice ဂျာနယ်ထဲမှာ မန္တလေးက တရုတ်ကုန်သည်က တရုတ်ပြည်က စားသုံးရန်မသင့်သော ဆီတွေကို တင်သွင်းလာသည်ဟု ဖတ်လိုက်ရသည်။ ထိုဆီသည် မြောင်းထဲက ဆီတွေကို ပြန်လည်သန့်စင်ပြီး အနံ့ထည့်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုတရုတ်ကုန်သည်ကပဲ ဈေးကွက်ထဲက မြေပဲဆံတွေကို ဈေးမြင့်မြင့်ပေးဝယ်ပြီး တရုတ်ပြည်ထဲ ပြန်ပို့ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတွင်းက တခြားကုန်သည်တွေက မြေပဲဆံကို ထိုတရုတ်ကုန်သည်နှင့် အပြိုင် ၀ယ်ယူနေကြရသည်။ မနေ့ညက ဖတ်ရတဲ့ Weekly Eleven မှာတော့ ထိုစားသုံးရန်မသင့်သော ဆီ၏ တစ်ပိဿာဈေးမှာ ၃၀၀၊၄၀၀ ၀န်းကျင်ဖြစ်သည်။ မန္တလေးက တရုတ်ကုန်သည်က ထိုဆီကို ဈေးကွက်ထဲ ဖြန့်ဖြူးပြီး ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ လက်လီ၊လက်ကား ပြန်ရောင်းသည့် ဆိုင်တွေကလည်း ထိုဆီကို ပြည်တွင်းက စားအုန်းဆီတွေနှင့် ရောနှောပြီး ရောင်းသည်။ ဒီအတိုင်း တစ်ပိဿာ ၃၀၀၊၄၀၀ နှင့်ရောင်းလျှင် မည်သူကမှ ထိုဆီကို ဆီဟုယုံကြည်ပြီး စားကြမည် မထင်ပါ။ ထိုသတင်းတွေကို ဖတ်လိုက်ရတော့ လူတွေ၏ လောဘကို ကြောက်ခမန်းလိလိ မြင်တွေ့ရ၏။
ထိုသတင်းတွေကို ဖတ်ပြီးပြီးချင်း စာရေးသူ အပြင်က အစားအစာတွေကို လုံးဝမစားရဲတော့ပါ။ စာရေးသူ အကြော်သိပ်ကြိုက်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အကြော်ဆိုင်ကမှ အကြော်တွေကို ပဲဆီနှင့် မကြော်ပါ။ စားအုန်းဆီနှင့်သာ ကြော်ပါသည်။ အရင်ကဆို စာရေးသူ အကြော်စားလွန်းသည့်အတွက် မေမေက စာရေးသူကို လျှော့စားရန် အမြဲသတိပေးရတတ်သည်။ အခုသတင်းတွေကို ဖတ်ပြီးပြီးချင်း အကြော်သိပ်စားချင်သည့်စိတ်ကို မြိုသိပ်ထားလိုက်သည်။ ထိုသတင်းတွေကြောင့် မေမေက စနေနေ့တိုင်း အကြော်ကို ပဲဆီနှင့် အိမ်မှာပဲ ကြော်ပေးမည်။ တခြား အခြေခံလူတန်းစားတွေကရော အကြော်ကို အိမ်မှာပဲ ကြော်စားဖို့ အခွင့်အရေးရှိပါ့မလား။ ဒါဆို သူတို့တွေရဲ့ ကျန်းမာရေး က တစ်နည်းနည်းနဲ့ ချို့ယွင်းလာမှာတော့ အမှန်ပင်။ စာရေးသူတို့နိုင်ငံမှာ စားသုံးသူအခွင့်အရေးဆိုတာ ကောက်ရိုးပုံထဲ အပ်ရှာရသလို ဘယ်သွားရှာရမည်မသိ။
ထိုစားသုံးရန်မသင့်သည့် ဆီတွေကို နိုင်ငံထဲရောက်အောင် သွင်းလာသည့် တရုတ်ကုန်သည်ကိုပဲ အပြစ်တင်ရမည်လား။ ၀င်ခွင့်ပေးလိုက်သည့် အကျင့်ပျက်ခြစားသည့် ၀န်ထမ်းတွေကိုပဲ အပြစ်တင်ရမည်လား။ လူမဆန်သည့် အပြုအမူတွေအတွက် ထိရောက်သည့် ပြစ်ဒဏ်က ဘယ်မှာလဲ။
စကားမစပ် စာရေးသူတို့နိုင်ငံက ကလေးလေးတွေ တရုတ်နိုင်ငံမှလာသော မုန့်ထုပ်များကို အားရပါးရစားနေကြတာ တွေ့မြင်နေရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် စီးပွားရေးကျင့်ဝတ်မစောင့်ထိန်းသော နိုင်ငံဟု စာရေးသူ ခံစားမိသည်။ နို့မှုန့်တွေထဲမှာလည်း မယ်လမင်းဓာတ်တွေပါလို့ ကလေးလေးတွေ အသက်ဆုံးရှုံးရသည်။ စားသုံးရန်မသင့်မှန်းသိပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်ကို ဆက်ထုတ်သည်။ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသည့် အခြေအနေတွေတွေ့ရှိရမှသာ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ဈေးကွက်ထဲက ပြန်သိမ်းသည်။
စာရေးသူတို့နိုင်ငံက မြန်မာမုန့်တွေသည် အဖိုးနည်းပြီး အာဟာရပြည့်ဝသည်။ မုန့်ဖက်ထုပ်၊ ပဲဆုပ်၊မုန့်ပြားသလပ်၊မုန့်ပေါင်း၊ ကောက်ညှင်းပေါင်း ၊ မုန့်ဗိုင်းတောင့် စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။ ငယ်ငယ်က ထိုမုန့်တွေနှင့်ပဲ ကြီးပြင်းခဲ့ရသည်။ စာရေးသူတို့ငယ်ငယ်က ကလေးတွေကို ဆွဲဆောင်မည့် ရောင်စုံမုန့်ထုပ်တွေ သိပ်များများစားစား မရှိပါ။ အခုခေတ် ကလေးလေးတွေကတော့ အာဟာရမပြည့်ဝသည့် ထိုရောင်စုံမုန့်ထုပ်တွေကိုပဲ မက်မောနေကြသည်။ ထိုမက်မောမှုကို မိဘတွေက ၀င်ရောက်ထိန်းသိမ်းပေးစေချင်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ပြောချင်တာက စားသုံးသူအခွင့်အရေးကို ပီပြင်စေချင်သည်။ မသမာမှုများကြောင့် စားသုံးသူအခွင့်အရေးကို ထိခိုက်လာခဲ့လျှင်လည်း ထိုမသမာမှုကို ထိထိရောက်ရောက်ပြစ်ဒဏ်ပေးမည့် ဥပဒေရှိစေချင်သည်။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေ၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေလျော့ကျသွားပါစေဟု ဆုတောင်းရင်း မြန်မာနိုင်ငံသားများ တန်ရာပေးရင် တန်ကြေးရကြပါစေ…။
Posted by Unknown at 12:19 AM4comments: Links to this post
ကြယ်တွေတောင် တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပဲ လင်းတယ်
ခေတ္တစောင့်ဆိုင်းပြီးမှ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုပါရှင် စကားအဆုံး
အချစ်တွေကို (၁၅၀၀)ပြည့်အောင် မရေတွက်နိုင်ခဲ့ဘူး….
Posted by Unknown at 11:04 PM4comments: Links to this post
ငါနဲ့ နီးဖို့မင်းဘက်က တစ်လှမ်းချင်းလျှောက်မလာနိုင်ရင်တောင်
Labels: Notes on my Facebook
အင်း ဦးစီးအရာရှိဇာတ်လမ်းလေး ငြိမ်သွားပြီဆိုပြီး အတွေးလေးနဲ့ ကြည်နူးတုန်းရှိသေး…. ကံကြမ္မာက စာရေးသူကို မျက်နှာသာမပေးချေ။ အရာရှိစာမေးပွဲဖြေပြီး တစ်လကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာပေ့ါ… ည(၈) နာရီခွဲလောက်မှာ အဖိုးအိမ်က ဖုန်းကို စာရေးသူနဲ့ ဖုန်းပြောချင်လို့ဆိုပြီး ဖုန်းလာပါသည်။ “ဟာငါ့ဖုန်းလှမ်းမဆက်ဘဲ။” ဆိုပြီး စိတ်ထဲနည်းနည်းချဉ်သွားသည်။ စာရေးသူတို့အိမ်နှင့် အဖိုးအိမ်က နည်းနည်းလှမ်းပါသည်။ “မြန်မြန်လုပ်။ဆိုင်ကယ်ပေါ် မြန်မြန်တက်။ ဟိုဘက်က ကိုင်ထားမှာတဲ့။” ဆိုပြီး အသိတစ်ယောက်က လာခေါ်ပါသည်။ “ဘယ်က ဖုန်းလဲ။” “ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာနကလို့ပြောတာပဲ။ဦးစီးကိစ္စထင်တယ်။” “ဘာ။” စာရေးသူစိတ်ထဲ လန့်တန့်တန့် ဖြစ်သွားသည်။ ဘုရား … ဘုရား။ ငါ ရထား(၇)စီးပဲ ရှိတယ်ဖြေခဲ့လို့ အပြစ်ပေးမလို့လားပေါ့။ ထုံးစံ။ ထုံးစံမှမရှိတာပဲ။ ၀န်ကြီးဌာနဘက်က စဆက်တယ်ဆိုတာ။ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ လိုက်သွားရပါသည်။ ဟိုဘက်ကလည်း တော်တော်ဇွဲကောင်းပါသည်။ ဖုန်းကို ကိုင်ထားဆဲပါ။ “ဟယ်လို.. အမိန့်ရှိပါ။ ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲရှင်။” လို့ စာရေးသူက စပြောလိုက်တော့ ဟိုဘက်က “ဟုတ်ကဲ့။ ရသုံးမှန်းခြေ ဒုဦးစီးမှူးရာထူးအတွက် ညီမလေးကို လျာထားပါတယ်။” တဲ့။ “လုပ်နိုင် မလုပ်နိုင် အကြောင်းပြန်ပေးပါ။” တဲ့။ ဒါနဲ့ စာရေးသူလည်း ဘယ်ကဆက်တာလဲမေးလိုက်တော့ ရုံးအမှတ်(၁၇) ကပါတဲ့။ ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ ဒီဘက်မှာမြင်နေရပါသည်။ စာရေးသူကလည်း လူဘယ်နှစ်ယောက်လျာထားသလဲ မေးကြည့်တော့ အဲဒါလျှို့ဝှက်ချက်ပါတဲ့။ ဒုဦးစီးမှူးလစာက ဘယ်လောက်လဲ မေးလိုက်တော့ ခြောက်သောင်းခွဲတဲ့။ “ဟင်ငါ့အဖေ ပေးတဲ့ မုန့်ဖိုးလောက်တောင်မရှိဘူး။” ဆိုပြီး စိတ်ထဲက ပြောနေမိသည်။ ဒုဦးစီးမှူးနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင် ဦးစီးအရာရှိတန်းဖြစ်မှာတဲ့။ စဉ်းစားချိန်နှစ်ရက်ပေးမယ်တဲ့။ အဲဒါတွေ ရွှန်းရွှန်းဝေအောင်ပြောပြီး ဖုန်းချသွားသည်။
ပြဿနာက ထိုမှ စတင်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းသည် စာရေးသူတို့ အမျိုးတွေကြားမှာ ပျံ့နှံ့လို့သွားသည်။မေမေတို့ကို ပြန်ပြောပြတော့ ဒုဦးစီးမှူးပဲဆိုသည့်အတွက် အင်တင်တင်လုပ်နေပါသည်။ဒါပေမဲ့ ဟိုဘက်က စကမ်းလှမ်းတာလေးကိုလည်း ဂုဏ်ယူနေကြပုံပါပဲ။ (အဲဒီ ဂုဏ်ကို တော်တော်အမြင်ကပ်ပါသည်။)
နောက်တစ်ရက်မှာ စာရေးသူ လက်ကိုင်ဖုန်းကို ထိုဖုန်းနံပါတ်က ဆက်လာခဲ့သည်။ “ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလား။” တဲ့။ “အစ်မရယ် ဖေဖေတို့နဲ့ တိုင်ပင်နေတုန်းပါ။” လို့ ပြောလိုက်ရသည်။ ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် ပြန်အကြောင်းကြားပေးပါ့မယ် လို့ ပြောလိုက်ရသည်။ ဟိုဘက်ကလည်း လုပ်နိုင် မလုပ်နိုင် မြန်မြန်သိချင်ကြသည်။ ထို(၄၈)နာရီသည် စာရေးသူအတွက် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလှ၏။
သူငယ်ချင်းဦးစီးအရာရှိတွေက “နင် သေချာစဉ်းစားနော်။ နင်နဲ့ Level တူတဲ့သူတွေက နင့်အထက်အရာရှိဖြစ်ပြီး နင်က ဒုဦးစီးမှူးဆို နင်အနှိမ်ခံရမယ်။” တဲ့။ စာရေးသူအဖေမိတ်ဆွေတွေက “နှစ်နှစ်လောက်များသည်းခံလိုက်ပေ့ါ။ နှစ်နှစ်ပြီးရင် အရာရှိတန်းဖြစ်မှာပဲ။ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှာ လုပ်ရမှာ ဘယ်လောက်ဂုဏ်ရှိလိုက်သလဲ။” တဲ့။ ထို တောင်နှင့်မြောက် အရှေ့နှင့်အနောက် အကြံပေးချက်တွေကြား စာရေးသူ ခက်ခက်ခဲခဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရသည်။ (၄၈)နာရီပြည့်တော့ ဟိုဘက်ကို အကြောင်းပြန်လိုက်သည်။ “ဟုတ်ကဲ့။ လုပ်ပါ့မယ်ပေါ့။” ဘယ်တော့စလုပ်ရမှာလဲ မေးလိုက်တော့ “ ဟုတ်ကဲ့ လူကြီးကို အကြောင်းကြားပြီးရင် ပြန်ဖုန်းဆက်ပေးပါ့မယ်။” တဲ့။ ကဲကောင်းရော။
ထိုနေ့မှစ၍ မေမေသည် ဗူးကြီးဗူးငယ်က အစ စာရေးသူသွားရင် အကြော်အလှော်တွေထည့်ပေးဖို့ စစုပါတော့သည်။ စာရေးသူ ထိုကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံလိုက်ခြင်းမှာ မေမေ့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ မေမေသည် သူ့တုန်းက မဖြစ်ခဲ့သော အိပ်မက်ကို စာရေးသူဆီမှာ ပုံဖော်၏။ ဟိုပစ္စည်းလေးလည်း သမီးသွားရင် ယူသွားဖို့။ ဒီပစ္စည်းလေးသုံးမယ်ကြံလိုက်ရင် နေပြည်တော်ရောက်မှ သုံးပါ သမီးရယ်တဲ့။ အစိုးရအလုပ်အပေါ် မေမေရဲ့ ရုးသွပ်မှုကို အံ့သြရပါ၏။
စာရေးသူ အဒေါ်တွေကလည်း မေမေနဲ့ အင်မတန် တက်ညီလက်ညီ ရှိလှ၏။ တစ်ပတ်တစ်ခါ ရုံးအမှတ်(၁၇) ကို ဖုန်းဆက်ဆက်မေး၏။ ဒီကြားထဲမှာ စာရေးသူလုပ်နေသော အလုပ်ကနေ ထွက်လိုက်သည်။ ဟိုဘက်က ခေါ်ရင် ချက်ချင်းသွားလို့ရအောင် ဆိုပြီးတော့ပါ။ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားသော စာရေးသူသည် နေပြည်တော်က လှမ်းခေါ်မည့်အချိန်ကို လည်တဆန့်ဆန့် မျှော်နေခဲ့ရပါသည်။
အလုပ်ထွက်ပြီး တစ်လနီးပါးကြာသည်အထိ ဘာသတင်းမှ မကြားပါ။ ထိုနေ့ကတော့ မေမေနှင့် အဒေါ် ဖုန်းဆက်ပြီး မျက်နှာမကောင်းဖြစ်နေကြသည်။ “ဘာတဲ့လဲ။” လို့မေးကြည့်တော့ “ဟိုဘက်က တခြားအလုပ်ရှိရင် လုပ်လိုက်ပါတော့။ဒီဘက်က စီမံချက်ပျက်သွားပြီ။” တဲ့။ စာရေးသူကတော့ ဘာမှ မဖြစ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ မေမေကတော့ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါသည်။
စကားတွေက လွယ်လိုက်ကြတာနော်။ တစ်ဖက်လူရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို နည်းနည်းမှ ထည့်စဉ်းစား မပေးခဲ့ကြပါလား။ စာရေးသူ ၀မ်းမနည်းတာအမှန်ပါ။ စာရေးသူဘ၀က တစ်စုံတစ်ရာ ဆုံးရှုံးပြီးရင် ထို့ထက်ပိုကောင်းသောအရာ အမြဲ ပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါသည်။ ယခုချိန်မှာ ထိုဒုဦးစီးမှူးရာထူးနှင့် လွဲချော်ခဲ့ပြီး အခိုက်အတန့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသော စာရေးသူသည် လစာပိုကောင်းသော တက်လမ်းရှိသော အလုပ်တစ်ခု လက်ဝယ်ပိုင်ထားပြီး ဖြစ်သည်။
ထိုနေ့မှစ၍ မေမေသည် အစိုးရအလုပ်က ဂုဏ်ရှိတယ်ဆိုသော စကားကို မဆိုတော့ပြီ။ သတင်းစာထဲမှာ ဦးစီးအရာရှိ ခေါ်သော စာမျက်နှာများကိုလည်း လျစ်လျှူရှုတတ်နေပြီ။
ရုံးအမှတ်(၁၇)မှ အမည်မသိသော ၀န်ထမ်းများကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ မေမေ့စိတ်ကို နာကျင်စေခဲ့တဲ့အတွက်တော့ ခွင့်မလွှတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူသည် အစိုးရအလုပ်ကို ဘ၀တစ်သက်တာ ဘိုင့်ဘိုင့်လုပ်လိုက်ပါကြောင်း ဤစာမျက်နှာပေါ်က ကြေငြာလိုက်ပါရစေ….
အခုပြောမယ့် အကြောင်းအရာတွေဟာ စာရေးသူ ခံစားမိလို့ ရေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေပါ။ ရောက်တတ်ရာရာဆိုပြီး အပိုင်းခွဲရေးပါ့မယ်။ စာရေးသူဟာ နိုင်ငံရေးသမားလည်း မဟုတ်သလို စီးပွားရေးပညာရှင်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဂျာနယ်ထဲ ဖတ်မိသမျှလေးတွေ၊ ကိုယ်တိုင်တွေးမိတာလေးတွေ၊ ကိုယ်တွေ့ကြုံရတာလေးတွေကို ဘလော့ပေါ်မှာ ပွစိပွစိတက်ပြောခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ထိခိုက်နစ်နာမိသွားစေပါက အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်က စာရေးသူ ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းဌာန ဦးစီးအရာရှိ စာမေးပွဲဖြေခဲ့ပါသည်။ “ငါတို့ သေသွားရင် နင့်ကို တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ရမှာ။ အစိုးရ အလုပ်က ဂုဏ်ရှိတယ်” ဆိုတဲ့ မေမေရဲ့ ဆန္ဒအရ စာမေးပွဲဖြေဖို့ လျှောက်လွှာတင်ခဲ့ပါသည်။ (မှတ်ချက်။ တစ်ဦးတည်းသော သား၊သမီးတွေဟာ မိဘတွေရဲ့ ဆန္ဒကို လိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးရတာများပါတယ်။) စာမေးပွဲဝင်ကြေး(၅၀၀) ကို အစိုးရဘဏ်မှာ သွားသွင်းရပါသည်။ အဲဒီတုန်းက စာရေးသူ မနက်(၉)နာရီခွဲလောက်ကတည်းက ဘဏ်မှာ ရောက်နေခဲ့သည်။ ငွေသွင်းချလံလေးရဖို့ မနက်(၉)နာရီခွဲကနေ ညနေ(၄)နာရီလောက်ထိ ထိုင်စောင့်ခဲ့ရသည်။ လက်မှတ်ထိုးပေးမည့်သူက မနက်(၁၀)နာရီကျော်ကျော်မှ ရောက်လာသည်။ မနက်(၁၁)နာရီကနေ နေ့လည်(၂)နာရီ လောက်ထိက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ။ စာရေးသူတော်တော်ဒေါသထွက်သွားသည်။ ဒီတစ်ခါ အစိုးရ စာမေးပွဲဖြေတာ ပထမဆုံးနှင့် နောက်ဆုံးဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချမိသွားသည်။ အစိုးရ၀န်ထမ်းတော်တော်များများ၏ အချိန်မလေးစားပုံကို မုန်းမိသည်။ အားလုံးကို မဆိုလိုပါ။
ဦးစီးအရာရှိရေးဖြေစာမေးပွဲအတွက် မေမေက ကျူရှင်တက်ခိုင်းပါသည်။ စာရေးသူက ဂျစ်ကန်ကန်နှင့် မတက်ခဲ့ပါ။ ဘွဲ့ရလူငယ်တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီးဖြေနိုင်ရမည်ဟု ကြီးကျယ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ (အမှန်တကယ်တော့ ခြေချော်လက်ချော် စာမေးပွဲအောင်ပြီး ဦးစီးအရာရှိလုပ်ရမည်စိုး၍ ဖြစ်သည်။) စာရေးသူ တက်လှမ်း၊အောင်ကောင်းဆင့် စတဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ သတင်းစာတွေဖတ်ရပါသည်။ ရေးဖြေ(၃)ဘာသာဖြေရပါသည်။ မြန်မာ၊အင်္ဂလိပ်၊အထွေထွေဗဟုသုတပါ။ နေပြည်တော်မှာသွားဖြေရပါသည်။ စည်ပင်ရိပ်သာမှာ အခန်းရဖို့အရေး တော်တော်ထိုင်စောင့်ရသည်။ အဲဒီမှာပဲ မုံရွာ (MBA7Batch) က ကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့် ခင်ပြီး တစ်ခန်းတည်းတည်းဖြစ်သွားသည်။ စာမေးပွဲအတွက်စာမကြည့်ဘဲ စာရေးသူနှင့် မေမေကတော့ နေပြည်တော် တိရိစ္ဆာန်ရုံတို့ ရေပန်းဥယျာဉ်တို့ကို အားရပါးရလည်ပါသည်။ စာမေးပွဲကို ကောင်းကောင်းဖြေနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဟော အောင်စာရင်းထွက်လာတော့ ရေးဖြေအောင်ပါလေရော။ စိတ်ဓာတ်တော်တော်ကျသွားသည်။ (ဒါဆိုလည်း အောင်အောင်မဖြေခဲ့နဲ့ပေါ့လို့ မတွေးကြပါနဲ့နော်။ လူ့ရဲ့ အတ္တကြောင့်ပါ။) နှုတ်ဖြေအတွက် တစ်လ အချိန်ရသည်။ နှုတ်ဖြေအတွက် ကျူရှင်ကို မေမေတို့က နေပြည်တော်သွားတက်ခိုင်းသည်။ ဒီတစ်ခါလည်း စာရေးသူ ငြင်းလိုက်သည်။ စာရေးသူမှာ လက်ရှိအလုပ်က ခွင့်ယူပြီး သွားလို့မရကြောင်း ဂဂျီဂဂျောင်ကျလိုက်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ စာမေးပွဲအောင်အောင် လာဘ်ထိုးမပေးရဟု မှာထားရသေးသည်။ (စာရေးသူ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ လျှပ်စစ်ဦးစီး၊ရသုံးမှန်းခြေဦးစီးတွေရှိပါသည်။ လာဘ်ထိုးပြီးလိုက်ရသည့် လမ်းကြောင်းတွေအကြောင်း စာရေးသူသိပြီး ဖြစ်သည်။) ရင်းနှီးလိုက်ရမည့် ငွေပမာဏနဲ့ အရာရှိလစာကို ချိန်ထိုးရင်း အရင်းကြေမည့်ကာလကို တွက်ကြည့်ပြီးဖြစ်သည်။ အရင်းကြေဖို့ဆိုရင် ၀န်ထမ်းကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ သိပ်မသေချာတော့ပါ။ အကျင့်စာရိတ္တကို နင်းခြေရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအဖြစ်မျိုးစာရေးသူ အဖြစ်မခံနိုင်ပါ။ ထိုတစ်လအတွင်းမှာ စာရေးသူ ဆံပင်အရှည်ကို ဗိုလ်ကေနီးနီးညှပ်ပစ်လိုက်ပါသည်။ ခေါင်းရှုပ်လို့ဆိုသည့် အကြောင်းပြချက်နဲ့ပါ။ မကြည့်ချင်သည့်စာတွေကို လေ့လာရင်း နေပြည်တော်သို့ နောက်တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့ပါတော့သည်။
အမလေးလေး။ နှုတ်ဖြေမှာ ဆံပင်အတိုကြီးနဲ့ဆို မကောင်းဘူးလို့ သူငယ်ချင်းတွေက အကြံပေးကြသည်။ ဒါနဲ့ မေမေရယ် စာမေးပွဲဖြေမယ့် မနက်က မြို့မဈေးမှာ ဆံပင်တုသွားရှာသည်။ (စာရေးသူတော်တော်မွှေတာနော်။ မေမေကို ကြည့်ပြီး သနားလည်းသနားပါသည်။ ဘာလို့ အဲဒီအလုပ်ကို အရမ်းအာရုံထားနေလဲ နားမလည်ပါ။ လက်ရှိအလုပ်က လစာပိုများပါသည်။) နေ့လည်မှဖြေရသည့်အတွက် ပြင်ဆင်ချိန် တော်တော်ရသည်။ အကျီင်္အဖြူရင်ဖုံး ၊ ကတီပါဖိနပ် နဲ့ ဆံထုံးနဲ့။ တော်တော်အလုပ်ရှုပ်ပါသည်။
စာရေးသူ အလှည့်ရောက်တော့ နှုတ်ဖြေမေးမည့် အခန်းထဲ ၀င်သွားရသည်။ ၀င်ဝင်ချင်း လူကြီး(၃) ယောက်ထိုင်နေသည်။ သူတို့ကို ဦးညွှတ်ရသည်။ ထိုအချိန်မှာ ‘ငါ့ ဆံထုံးများပြုတ်ကျသွားရင်သွားပါပြီ’ ဆိုပြီး ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ပါ။ နာမည်မေးမိတ်ဆက်ပြီးတော့ မေးခွန်းများမေးပါသည်။
‘ကိုယ့်အကြောင်းကို အင်္ဂလိပ်လို ပြောပြပါ’ တဲ့။ ဟားဟား ဒါမျိုးကတော့ ပါးပါးလေးပဲ။ ထိုမေးခွန်းကို ဖြေနိုင်လိုက်သည်။
‘မြန်မာနိုင်ငံ အလံမှာ ဘယ်နှရောင်ပါလဲ။’ တဲ့။ ‘သုံးရောင်ပါ ရှင့်။’ ‘ဟုတ်လို့လား။’ စဉ်းစားသည်။ အမလေးလေး အလယ်ကောင်က ကြယ်ဖြူကို မေ့နေသည်။ ‘လေးရောင်ပါ ရှင့်။ အ၀ါ၊ အစိမ်း၊အနီ၊ အဖြူပါ။’
‘မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရထားဘယ်နှစီးရှိသလဲ။’ တဲ့။ ဟင်ငါကြည့်ထားတဲ့ထဲမှာ ရထားဘယ်နှစီးရှိတယ်ဆိုတာ ပါမှမပါတာကြီး။ဘယ်သိမလဲနော်။ ငါခုထိ ရထားတစ်ခါပဲ စီးဖူးသေးတာ။ ဘယ်နှစီးရှိတာလောက်တော့ ငါဘယ်သိမလဲ။ စာရေးသူစိတ်ထဲကပြောနေခြင်းပါ။ စဉ်းစားနေရင်း ပါးစပ်ကလွှတ်ဆိုထွက်သွားသည်။ ‘(၇)စီးပါ။’ (စာရေးသူ အကြိုက်ဆုံး ဂဏန်းတွေက (၁၊၇၊၉) ရယ်ပါ။ တော်သေးတာ (၁)လို့ သွားမဖြေမိလို့။)
‘မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး ဥက္ကဌက ဘယ်သူလဲ။’ (ထိုမေးခွန်းဘာကြောင့်မေးတာလဲဆိုတော့ စာရေးသူရဲ့ လျှောက်လွှာကိုယ်ရေးအကျဉ်းမှာ ၂၀၀၄ ခုနှစ် မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ၀တ္ထုတို ပြိုင်ပွဲ မှာ ဒုတိယ ရခဲ့ဖူးသည်ဟု ရေးခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။)
ထိုမေးခွန်းလည်းမဖြေနိုင်ပါ။ လက်ရှိဥက္ကဌကို မသိတာအမှန်ပါ။ ထိုနေ့က မေးခွန်း (၂၅) ခုလောက်မှာ (၁၀) ခုနီးပါးလောက်ပဲ ဖြေနိုင်ခဲ့ပါသည်။ နွားကျောင်းသားအမေးကို ပညာရှိမဖြေနိုင်တာ မဆန်းပါဘူးနော်။ ဟီးဟီး။ ဟုတ်တယ်လေ။မေးတာလဲ ကြည့်ဦး။ ရထားဘယ်နှစီးရှိတာလဲတဲ့ လူကို။ ကိုယ့်ရပ်ကွက်ထဲတောင် လူဘယ်နှယောက်ရှိမှန်း မသိတဲ့လူကို။
မဖြေနိုင်သည့်အတွက် ၀မ်းသာအားရ ထိုအခန်းထဲမှထွက်လာခဲ့သည်။
အောင်စာရင်းထွက်လာတော့ စာရေးသူမအောင်ပါ။ နင်စာမေးပွဲ မအောင်တာ ငါတို့နေပြည်တော်မှာ ကျူရှင်တက်ခိုင်းတာ မတက်လို့ဖြစ်တာ ဆိုသည့် ပိကျိပိကျိ အသံကိုတော့ အမြဲနားသောတဆင်ရပါတော့သည်။ အတွေ့အကြုံကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။
Posted by Unknown at 7:47 PM6comments: Links to this post
သယံဇာတ ပေါများခဲ့ပါတဲ့ ငါတို့နိုင်ငံ
ဘာရယ်လို့ မခွဲခြားနိုင်ခင် မကွဲပြားနိုင်ခင်
ထားဝယ်ရေနက်၊ သီလ၀ါဆိုတဲ့ ငါးစာချ
Project Manager လား
စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့ သဘာဝ တောတောင်တွေနဲ့
ငါတို့မျိုးဆက်တွေ ခံစားခွင့်၊ ကြည်နူးခွင့်ရပါစေသား……..။
ကိုပဲလေး ဘလော့မှ ကြိုဆိုပါဧ။်
၂၀၁၇-၁၈ မိုဘိုင်းဖုန်းရောင်းအားအကောင်းဆုံး ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ(၁၀)ခု
Myanmar Post Journal
Yagon Times Journal
Notes on my Facebook (6)
ရင်ကိုထိသော ကဗျာများ (4)
စာရေးသူရဲ့အခုလက်ရှိဘလော့ဂ်သည် (၆.၇.၂၀၁၂) ကခဏပျောက်ဆုံးခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူနောက်ထပ်ဘလော့ထပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအသစ်လုပ်ထားတဲ့ ဘလော့...
မနေ့ညက ငါ့ကောင်းကင်မှာ လမင်းမသာဘူး………. ကြယ်တွေတောင် တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပဲ လင်းတယ် ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပ ခေတ္တစောင့်ဆိုင်းပြီးမှ ပြန်...
ညက အိပ်မက်ထဲမှာ စာရေးသူ အကြော်တွေ အားရပါးရ စားနေခဲ့သည်။ ခရမ်းသီးကြော်၊ဗူးသီးကြော်၊ဗယာကြော်။ အကြော်တွေကို စုံလို့။ အချဉ်ကလည်း ကောင်းမှကောင်...
၂၀၁၁ တစ်နှစ်လုံး သူ့စိတ်တွေ လေနေခဲ့သည်။ မဟုတ်ဘူး။ သူ့စိတ်တွေလေနေခဲ့တာ ၂၀၁၁ တစ်နှစ်တည်းမှ မဟုတ်တာ။ သူ ဘွဲ့ရပြီးကတည်းကဆိုတော့ တွက်ကြည့်ရင်...
ကျေးဇူးပြုပြီး အဲဒီနေရာမှာပဲ ရပ်နေပေးပါ…. ငါနဲ့ နီးဖို့မင်းဘက်က တစ်လှမ်းချင်းလျှောက်မလာနိုင်ရင်တောင် အဲဒီနေရာမှာပဲ မင်း ရပ်နေေ...
အခုပြောမယ့် အကြောင်းအရာတွေဟာ စာရေးသူ ခံစားမိလို့ ရေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေပါ။ ရောက်တတ်ရာရာဆိုပြီး အပိုင်းခွဲရေးပါ့မယ်။ စာရေးသူဟာ နိုင်ငံ...
2 nd Yr Final Term အင်္ဂလိပ်စာဖြေပြီး ထွက်လာတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က စာရောက်နေလို့ဆိုပြီး ယူလာပေးတယ်။ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ အတွေးက ကျွန်မရင်ထဲ ခဏတော...
တက္ကသိုလ်တစ်ခုက ကျောင်းသားလူငယ်တစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့မှာ ကျောင်...
အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ဟာ အိမ်အပြင်ဘက် ထွက်လိုက်တော့ သူမရဲ့ခြံရှေ့ထိုင်နေတဲ့ မုတ်ဆိတ်ဖြူအရှည်ကြီးတွေနဲ့ အဘိုးအို သုံးယောက်ကို မြင်တွေ့ရတယ်။...
အဖေကို ဦးညွှတ်ဖို့ ကြည့်လိုက်တော့ အဖေက မရှိတော့ဘူး အဖေ…….။ ပန်းပွင့်ထဲမှာ ရနံ့ထည့်သူကို လေးစားရမှာလား ပန်းစိုက်သူကို အသိအမှတ်ပြုရ...
Copyright by YoeMyayKya , 2012. Simple theme. Powered by Blogger.